Minister of Religious Affairs Thura Aung Ko and Levi Sap Nei Thang - We Love Myanmar
Posted on August 3, 2017 August 30, 2017 by We Love Myanmar
သာသနာရေးရာဝန်ကြီး သူရအောင်ကိုနှင့် I Love Myanmar မှ ဒေါ်လီဗီဆပ်နိုင်ထန်းတို့ တွေ့ဆုံ
ယနေ့ သြဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီမှာ သာသရာရေးရာဝန်ကြီးရုံး ဧည့်ခန်းမဆောင်တွင် ၀န်ကြီး သူရဦးအောင်ကိုနှင့် ဒေါ်လီဗီဆပ်နိုင်ထန်းတို့သည် သာသနာရေးရာ ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှုးတို့နှင့်အတူ ၂ နာရီကြာ တွေ့ဆုံကြပါသည်။
၀န်ကြီး သူရဦးအောင်ကိုသည် လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ သာသနာရေး ဒုဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်က ချင်းပြည်နယ်ဖွင့်ဖြိုးရေးဝန်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်အခါက ချင်းပြည်နယ်အတွင်း I Love Myanmar မှ လှုဒါန်းနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ချင်းပြည်နယ် နယ်စွန်နယ်ဖျားထိအနှံ့ရောက်ခဲ့ကာ ဒေါ်လီဗီဆပ်နိုင်ထန်း မွေးဖွါးရာ ချင်းပြည်နယ် သီးဘွဲလ်ရွာအထိ အလည်အပတ် ရောက်ဖူးခဲ့သူဖြစ်သည်။ I Love Myanmar လုပ်ငန်းများကိုလည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ကူညီသူလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ချင်းပြည်နယ်ကို သံယောဇဉ်ကြီးသူဖြစ်သည့်အတွက် ၂၀၁၄ ခုနှစ် မေလတွင် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ အလည်သွားစဉ် ဂျပန်အစိုးရနှင့် ဆွေးနွေး၍ ချင်းပြည်နယ်အတွက် နိုင်ငံတော်ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံရရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုငွေကြေးဖြင့် ယခုအချိန်တွင် ချင်းပြည်နယ်ရှိ လမ်းများကို တိုးချဲ့ကာ ကတ္တရာလမ်းများ စတင်ခင်းနေပြီဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်တွင် ၀န်ကြီး သူရဦးအောင်ကိုသည် သာသနာရေးရာဝန်ကြီးအဖြစ် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာတွင် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးခွဲခြားမှု လုံးဝမရှိဘဲ တန်းတူရည်တူ ဆက်ဆံသော လူချစ်လူခင်များသည့် မာန်မာနမရှိသော ၀န်ကြီးဖြစ်ပါသည်။
821 thoughts on “Minister of Religious Affairs Thura Aung Ko and Levi Sap Nei Thang”
ဒီလို သူတော်ကောင်းတွေ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး တွေ့ဆုံပီး တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုး ဆွေးနွေးကြတာ မင်္ဂလာ တစ်ပါးပါ ။
Myit Myit Swe says:
Kochin Lay says:
Run Thang says:
Kan Chin mi in nangmah vek kan lo nei cuasunglawi hlei cee kan ti……
Silas Thang says:
God bless I Love Myanmar
Aung Min Soe says:
၀ံကြီး​တွေထဲမှာ ဦး​အောင်​ကိုကို လူမုန်းအများဆုံးပါဗျ။ သိပ်​ပြီးလည်းမဖားပါနဲ့။
​ဒေါ်လီဗီဆပ်​ နိုင်​ထန်းကို​တော့ သူ့ရဲ့ ရက်​​ရောလှတဲ့အလူအတန်း​တွေ​ကြောင့်​ ချစ်​ပါတယ်​။
သမီး​လေး ဧမာ​နွေလ ကြာအိုင်​လင်းလည်း ​ကောင်းရာဘုံဘ၀ကို​ရောက်​ရှီနိုင်​ပါ​စေ။
ကို မြန်မာ says:
​လေစား ပါ တယ်​
ပရဟိတ မိခင်​ တဦး ပါ
Daw Khin Khin Win says:
Aungthein Lin says:
ပြောလိုက် လုပ်လိုက်ရင်လဲ ဟိဟိ
သခင် ရဲသီဟ says:
ဘာ ကုလားလီးစုတ်​ ​အောင်​ကိုက လူချစ်​လူခင်​​ပေါ်တယ်​ ဘယ်​​ခွေးလိုးမနဲ့ ​ခွေးလိုးမသား ​ပြောတာလဲ
Daw Dhammasari says:
Oo Kyaw says:
အ​ပေါ်ပိုင်းကစာ​လေး​တွေ​ကောင်းပါတယ်​ ၀မ်းလည်း ၀မ်းသာပါတယ်​
Hector Cheah says:
U Thant UN says:
Saturn MO says:
ယခုတော့ ဘာသာရေးသစ္စာဖေါက်လို့ပင် ပြောရမလိုပင်
Sit Sat says:
စောက်ရူး မင်းဦးနှောက်ထဲ ချီးတွေ ရောက်နေပြီ
ဒီလောက်ရိုင်းနေရင်လည်း ကိုယ့်နှာခေါင်းနှဖါးကျိုးတတ်ထားလိုက်ပါ ကန်းနေတဲ့သူနဲ့ စကားပြောဖို့ဆန္ဒမရှိပါ လူလိုနားလည်ပါစေ
သီတဂူဆရာတော်ကြီးတို့ဆရာတော် ဦးဆေကိန္ဒတို့ ကဲ့ သို့ဒကာ ဒကာမများအကျိုးကြီးအောင် ဆောင်ရွက်နေသူ ဆရာတော်ကြီးများကို ဂိုဏ်း ဟုသတ်မှတ်လိုက်တာကတော့ပြည်သူတွေ က ဘယ်ကြိုက်မလဲ
Babykyaw Min says:
အခု fb မှာတက်နေတဲ့ပုံတွေကသံဃာ
Anaw Rahtar says:
Htay Aung says:
Maunh Htut says:
Min Min Kyaw says:
​23 june 2008 မှာချင်း​ကျောင်းဆရာမ​လေးတဦးကိုမုဒိန်းကျင့်​လို့ ချင်းလူ့အခွင့်​​ရေးအဖွဲ့အစည်း​တွေကတရားစွဲတာခံရဖူးး
အရင်အစိုးကြောင့် သံဃာတွေ သေခဲ့ကြတယ်
ဒီအစိုးရကြောင့် သံဃာတွေ ကွဲကြတယ်
မဘသနဲ့မဟန တိုက်ပေးတဲ့အဓိကတရားခံက အစိုးရ
သာမန်ကြည့်ရင် ယခင်အစိုးရက ပိုဆိုးသလိုနဲ့
သေသွားတာက သေသလောက်ပဲ ကျဆုံးတာပါ
ဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တာတွေကိုဆန့်ကျင်နေရင်ဒကာ ဒကာမတွေကကိုးကွယ်မှာမဟုတ်ဘူးလေ သာသနာတော်ကြီးသန့်ရှင်းပါစေ
Khin Aye Cho says:
ဘာသာရေးသစ္စာဖောက် ဆိုတဲ့စကားကြီးက ဘာစကားကြီးလဲဟ ဘာသာရေးမှာသစ္စာဖောက်တဲ့
မူခဲ့ပါဘူး Satum Mo မင်းက
ဘာသာခြားမို့မသိလို့ပြောချင်လည်း ပညာတွေလေ့လာဆည်းပူး ပြီးဘာသာတွေ သိနားလည်အောင်ကြိုးစားပြီးခါမှပြည်သူတွေချစ်တဲ့ဝန်ကြီးသူရဦးအောင်ကို ကိုစွပ်ဆွဲပြောဆိုပါ
NLD အားပေးသူတိုင်းက အကန်းတွေနဲ့တူပြီး တဘက်ပိတ်သမားဝါဒကို အများစုကကျင့်သုံးကြတော့ ရိုင်းတဲ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာ နှစ်ယောက်မရှိလို့ ဘာမှရှင်းမပြလိုပါ လူလိုနားလည်ပါစေ khin aye cho
Akyaw Moe says:
မင်းပြောလို့ထပ်ရိုင်းလိုက်မယ် ခွေးမသား မင်းဘာသိလဲပြောဇမ်း
ထပ်ဟေါင်ချင်လည်းကြိုက်သလောက်သာဟောင်တော့ akuaw moe ရေ
Khin Aye Choလူကြီးသူမဖြစ်​ရင်​လူကြီးလို့​ပြော​နော်​​ပြောလိုက်​​ရင်​ဘာသာ​ရေးသမားလိုလိုနဲ့အဲ​လောက်​​တောင်​ရိုင်းရလား…ဖင်​ကြားထဲဒူရင်းသီးထည့်​​ပေးလိုက်​မယ်​​နော်​
Mate Chint says:
တိုက်တိုက်ထိုင်ဆိုင် ခုမနက်တောင်စဉ်းစားမိတယ် ဘယ်များပျောက်သွားပါလိမ့်လို့ ။
ဆန္ဒပြ သပိတ်မှောက် မဘသ ဘုန်းကြီးတွေကို ဥပဒေနှင့်အညီ ညင်ညင်သာသာ အရေးယူနိုင်ဖို့ ပြည်ထဲရေး ဒုဝန်ကြီးနဲ့ ညှိနိုင်း တိုင်ပင်လျက်ရှိပါတယ်။
Frank ZM says:
One billion $ really?
Zãw Min Han says:
Ansans Ansans says:
MgMg Kyaw says:
အစ်မကို သတိရနေတာ ပျောက်နေလို့
Moe Aung Tin says:
ကုလားအမြင်နဲ့ တော့ကောင်းနေတာပေါ့လေ
ကောင်းမြတ် သူ says:
ချင်းပြည်​နယ်​မှာ ​အောင်​ကိုမုဒိမ်းမှု ကျူးလွန်​ဘူးတယ်​။
Yea San says:
ရေဆန် လေဆန် says:
Ko Ko Hla says:
မနော ဖြူ says:
မနော ဖြူ မနောဖြူ says:
UWin Myint says:
Wunna Rolin says:
ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် အောင်ကိုနဲ့တွေ့ပြီး ကောင်းတာဖြစ်လာစရာကို မရှိဘူး
DawMoe Moe says:
မြန်မာကို ချစ်သူစစ်စစ် မို့ချစ်ပါတယ် ။
ချယ်ရီ မေ says:
Ye Naing Naing says:
ဟားဟားဟား ချင်းမလေးရေ….မင်းဘယ်ရောက်နေလဲ။ ကြောင်သူတော်ကြီးကတော့ ချဉ် ဖတ်..
Zbd Linyaung Zbdliyaung says:
May Thaw Chit says:
လူယုတ်မာတွေကတော့အကောင်းဘယ်လောက်ဘဲလုပ်ပေးလုပ်ပေးအပြစ်ဘဲရှာဖွေမှာဘဲ သူများနှမ်းစေ့လောက်အပြစ်ကိုအုန်းသီးလောက်မြင်ပြီး ကိုယ့်မျက်စိနားကပ်နေတဲ့မျက်ချီးကျတော့မမြင်တတ်ဘူးတဲ့
နှမ်းစေ့လောက် အပြစ်! ခင်ဗျား မသိတာလား? ကြောင်နေတာလား? ဝန်ကြီးတွေအများကြီးခန့်ထားတယ်။ ဘယ်ဝန်ကြီးကို နှုတ်ထွက်ဖို့ဆန္ဒ ပြနေလဲ သိလား။ ဒါဆို ဘယ်သူမှားနေတာလဲ။
Yar Pyie says:
မဘသ ကတော့ ဘယ်ချစ်ခင်ပါ့မလဲ။
အလွန်ထက်မြတ်အေးချမ်းပြီးအရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့သူရဦးအောင်ကိုလိုဝန်ကြီးတစ်ပါးရလိုက်တဲ့အတွက် သာသနာတော်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာအလွန်အမင်းတိုးတက်စရာ ဝမ်းမြောက်စရာတွေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်
ရွှဲ့ရေးတာမဟုတ်ပါ မနှစ်တပေါင်းလပြည့်နေ့က ဆရာတော်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုဘွဲ့ဆက်ကပ်တဲ့နေရာမှာလဲအစီအမံတွေသိပ်ကောင်းတာ ဆရာတော်သံဃာတော်များမပင်မပမ်းလေအောင်
အစစအရာရာစီမံဆောင်ရွက်ထားတာတွေ အလန့်အလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ် လိုလေသေးမရှိအောင်ဆောင်ရွက်ထားပုံ ရိုသေလေးစားပုံစသည်စသည်ပြောပြလို့မကုန်အောင်နိုင်ပင် အခြားအခြားသောနေရာတွေမှာလည်း အများအပြားပါဘဲ
ပြန်လေ့လာပါ။ ဒေါ်လီဗီဆပိနိုင်ထန်းကိုယ်တိုင် ခုတော့ ခေတ်တွေ အခြေအနေတွေအရ သူ့လူမျိုး သူ့ပြည်နယ်အတွက် မချစ်သော်လည်းအောင့်ကာနမ်းပေးရှာတာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လေးစားပါတယ် အန်တီ။ God bless to you!
Waryamein Da says:
Zo Thang says:
Saw Kyar says:
Thaw Ka says:
THAT IS RIGHT’
U Thein Than says:
ကျုပ်တို့ လည်း တိုင်းရင်းသားတွေပါ
Nankhin Hmwe says:
Phoe Thar Aung Baba says:
ချင်းမယူထားတဲ့’ ချင်းမကိုချွေးမတော်ထားရတဲ့ ကိုယ်တို့ကတော့ ချင်းပြည်နယ်တိုးတက်ဘို့ဆိုင်င် carry on ဝန်ကြီးခင်ဗျား
Phoe Zaw says:
ငယ်ကျိုးငယ်နာတေမသိသေးလို့ ချီးမွှန်းနေတာများး ခ်ခ်
Thi Ha MgMg Tin says:
Ye Kyaw Kyaw says:
Katherine Aung says:
မှတ်မိနေသေးလို့ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ် ❤️
Khin Khin Kyawt says:
Khin Thwe Oo says:
သ မီး လေး လား ညီ မလေး လား ဆုံး လို့ သ တင်း စာ က နေ ဝမ်းနည်း ခြင်း ထည့် ထည့် နေ တဲ့ တစ် ယောက် များလား
ဆုံး သွား တဲ့ ခ လေး အ ပေါ်တော် တော်ချစ် တာဘဲလို့ မ ဟုတ် ခဲ့ ရင် စိတ် မ ရှိ ပါ နဲ့
Elizabeth Ei Ei Hlaing says:
ဖိုး စီ says:
အမှန်​တကယ်​​လေးစားထိုက်​တဲ့ သာဝန်​ သူရဦး​အောင်​ကို
U Tun Shwe says:
မောင် ဆန္ဒ says:
နိုင်ငံတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် အားစိုက်ပြီးကြိုးစားနေကြသောဝန်ကြီးများ ကျ န်းမာကြပါစေ။မင်္ဂလာပါ ဝန်ကြီးသူရအောင်ကို ကျ န်းမာပါစေ။
ဝန်ကြီးမကျဘဲနဲ့ ကိုယ့်စေတနာကိုယ်အကျိုးပေးပြီးတော့ ကိုယ်ဘဲမြန်မြန်ကျရှုံးသွားမှာနော် သေချာသတိထားပါ
Boaung Din says:
သာ ကူး အောငှ ကို
U Zaw U Zaw says:
Ko Sunny says:
ထူးမြတ် မောင် says:
တစ်ခုမေးမယ် .. အဲ့ တုန်းက ချင်းပြည်နယ် မှာ သူရဦးအောင်ကို ကျောင်းဆရာမလေးကို မုဒိန်းကျင့် ခဲ့ တယ်လို့တစ်ချိူ့ တွေ အခိုင်အမာပြောနေကြတယ် .. ဟုတ်ပါသလား . ချင်းပြည်နယ်က levi sap nei thang တို့ ကပိုသိမှာပေါ့ နော် ..မှန်ရင်မှန်တယ် မှားရင်မှားတယ် ..ပွင်းလင်းထင်သာတဲ့လူ့ ဘောင်လူ့ လောက လူမှု့ အသိုင်းဝိုင်းမှာ သိခွင့် ရချင်ပါတယ် . အခု လီဗီဆပ်နိုင်က ဦးအောင်ကို ကို အမွှန်းတင်နေတော့အာဏာဆိုတာ အမြဲတည်မမြဲပေမယ့်သမိုင်းဆိုတာ ဘယ်တော့ မှမပျောက်နိုင်သလို ဆွေးသွားတဲ့ အမှု့ ဆိုတာလဲ ကမ္ဘာမှာ မရှိပါဘူးး … ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူး ပြည်သူတွေ အလင်းရရင် ကျေနပ်မှာပါ . ကျေးဇူးး
Mgsandha Mgsandha says:
ဦး​အောင်​ကို လို ပုဂ္ဂိုလ်​ ကို ​ပြောရက်​ လိုက်​တာ , ကျုပ်​ တို့ ​ကော့​သောင်း မှာ ဗျူဟာမှူး ဘ၀ နှင့်​ ​နေစဉ်​က ဦး​အောင်​ကို မပြုပြင်​ တဲ့ ​စေတီ ပုထို ဆိုတာ မရှိပါဘူး , မုဒိမ်းကျင့်​ ခဲ့တယ်​ ဆိုတာ သင်​ ဦး​အောင်​ကို ကို အပြစ်​မြင်​လို့ဖြစ်​မယ်​ , မပြစ်​ မှားပါနဲ့ ကိုယ့်​ထက်​ အသက်​ကြီး သူကို။
အမ် ဘုရားစေတီတည်တိုင်း သူတော်ကောင်းလားဗျ ..ဘာဆိုင်လို့ လဲ .ဒါဆို သူက အမြဲ ကံ၃ပါး ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံ နဲ့သီလ၅ပါးကို အမြဲ လုံခြူံစွာ စောင့် ထိန်းနေတယ်လို့ ခင်ဗျားပြောချင်တာလား .. ကျုပ်မေးတာက ချင်းပြည်နယ် မုဒိန်းမှု့ ကိတ်စပါ ..စွပ်စွဲတာလဲ မပါဘူး . လူတွေ တော်တော်မျးများက အဲ့ ကိတ်စ ကိုအုတ်အော်သောင်းနင်းပြောနေကြလို့ အခုလို ပွင့် လင်းမြင်သာတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ပြည်သူ့ လစာကို စားနေတဲ့ပြည်သူ့ ဝန်ကို ထမ်းနေတဲ့ဝန်ကြီးလေဗျာ .. မဟုတ်ရင်သူကိုယ်တိုင် ရှင်းလင်းပေါ့သူတောင်ဂုဏ်ပိုတက်သေးတယ် .ပြောတဲ့ သူတွေကိုလဲ အချက်အလက်နဲ့စိန်ခေါ်ပေါ့. ဒါမှအခုလို အများသူငါက ယုံထင်ကြောင်ထင် မထင်တော့ ဘူးပေါ့.. သူလဲမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တစ်သက်လုံး စိတ်ရှင်းလိပ်ပြာသန့် တယ်လေ .
ဆိုးတာက မြန်မာပြည်ထဲမှာ ရှိတဲ့လူတွေက မြန်မာပြည်ထဲက လူကိုဘဲ ပြန်မေးတာကို မြန်မာပြည်ထဲက လူကဘဲ ပြန်မဖြေနိုင်တဲ့စနစ်ကိုက ဆိုးရွားနေတာဗျ . ငါလူကြီးဗာက်ဂရုစိုက်စရာမလို ဘူး ပြန်ဖြေစရာမလိုဘူး လို့ သတ်မှတ်ရင် အဲ့ လူကြီးဆိုတာ အမြဲ မလူကြီးနိုင်ဘူးနော် .. အပေါ်မှာ ကျူပ်ပြောခဲ့ သလိုဘဲ ကျုပ်တို့ က တရားဝင် အခွန်ထမ်း နိုင်ငံသား . သူတို့ က ကျုပ်တို့ အခွန်တွေကို လခစား ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကျုပ်တို့ ရဲ့ ဝန်ထမ်းဘဲ . ကျုပ်တို့ မှာ သူတို့ နဲ့ ပါက်သက်ပြီး မေးမြန်းခွင့် ရှိတယ် . ဟုတ်တာ မဟုတ်တာ ဖြေရှင်းရမှာ သူတို့ အလုပ် ..လူတိုင်းဟာာ သူတာဝန်ခံတာဝန်ယူထားတဲ့ကံန္တတိုင်းမှာ .တစ်စက္ကန့် တစ်မိနစ်က အစ တာဝန်ယူမှု့ တာဝန်ခံမှု့ဆိုတာဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ ရှိကိုရှိရတယ်ဗျ .
ဖြစ်ရတယ် အောင်ကို ကိုပြောတာနဲ့nld အတုပြောရတယ် . အခုမေးနေတဲ့ သူက မင်းထက်ဘယ်လောက်အဆင့် ရှိတယ်ဆိုတာ မင်းငါရေးတဲ့ စာတွေကိုဖတ်တတ်ရင်နားလည်မှာပါ . ဒါမဲ့ မင်းကပညာမဲ့ နေတော့ မဖတ်တတ်တော့လူဘဲကြည့် တော့ပရိုဖိုင် တွေ nld အတုတွေ လောက်နဲ့ ပါးစပ်ဖျားလမ်းဆုံးနေတာ မင်းအရည်အချင်း ဒါဆို သာဝန် အောင်ကိုက nld ကလား ? ပြောကြည့် လေ အောင်ကို က nld ကို တစ်ချိန်လုံးလုပ်လာခဲ့ လို့ ဝန်ကြီးဖြစ်လာတာလား ? သာဝန်လို နေရာမျိူးတောင် တပ် ထွက်ကို ပြန်ခန့် ရတယ်ဆိုထဲက တိုင်းပြည်ရဲ့ အရေးကြီးနေရာတွေမှာ nld လူမရှိဘူးဆိုတာ အသေအချာဘဲလေ .. ငါတို့ က တော့ အောင်ကို ပြုတ်မှာတောင် ပိုကြောက်တယ် နှစ်ဖက်ချွန်အောင်ကို တော်တယ် ဟားဟားးး မတော်တာ တစ်ခုက အခုလူပြောများနေတဲ့ချင်းပြည်နယ်က ကျောင်းဆရာမလေး ကို အရင်က မုဒိန်းကျင့် ခဲ့ ကို ဘာလို့ သူမဟုတ်ပါဘူး ဆိုတာကို တရားဝင် ထွက်မငြင်းလေ သူကို အဲ့ ကိတ်စ လူပြောများလေဘဲလေ ..အဟတ်ဟတ် …
တုတုစစ်စစ်ဘာလုပ်မှာလဲ ရင်ထဲကလာတဲ့စကားတွေ မြင်ရရင်ပြီးပြီလေ
Mangpu Pa says:
Salai Naing Thingsai says:
မင်း တရားလို လုပ်​မှာလား။
Phyu Phyu Zaw Zaw says:
Thamar Thamat says:
သံလွင် ရေ says:
Myint Mg says:
နေရောင် ဝေး says:
အမှန်ဘဲ တပ်ထွက်အောင်ကို ကို သာသနာဝန်ကြီးခန့် လိုက်တာကထဲ က ဦးကိုနီအကြံဗျ .. သူလူကို သူနဲ့ ပြန်တိုက်ခိုင်းတာ … သူရဘွဲ့ရထားပြီး အရည်အချင်းမရှိလို့ဦးသန်းရွှက နေရာမပေးဘဲ ချောင်ထိုးခံ ခဲ့ ရတာ .ကို သူစစ်မှု့ ထမ်းတဲ့ အချိန်ထဲ က ပေါက်ကွဲ နေတာ အကုန်သိတယ် .. အဲ .. ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာခါနီး အချိနါကိုက်မှာ နေရာလိုချင်တဲ့အောင်ကို က သူသမီး နှင်းစံပယ်အောင်ကို ကို nld ကလူတွေနဲ့ ဝင်ပူး ခိုင်းပြီး ” မသေခင်အမေတည်တဲ့ရွာကြီးမှာ နေသွားချင်ပါတယ် ဆိုတဲ့… fb က post တစ်ခုနဲ့nld တွေကို ဦးကိုနီ ဝင်ပူး လုံးပြီး အယုံသွင်း ကာ သူ့ အဖေ အောင်ကို အတွက် နေရာ ယူပေးသွား တာ nld တွေ အငိုက်မိသွားတာ … hahaha လေးပေါ့…. နှင်းစံပယ်အောင်ကို ယောင်္ကျား ရောဂါအခံရှိတာထက် စိတ်တွေကျပီး အရက်တွေစွပ်သောက်လို့တပ်မတော်စစ်ဆေးရုံရောက်တာ က ပုံမှန်ရောဂါ လို့ ကံကုန်တာဆိုရင် …..
နှင်းစံပယ်အောင်ကိုရဲ့လင်သားအပေါ်ထားတဲ့.. သီလတရားက … hakhakhak …
airport ဆိုတဲ့ကွင်းကြီးထဲက လိန်ဗျံကြီးက …..
ပျံတက်ခါနီး .. ငှက်တွေကို လျှာထုတ်ပြသွားတာ nld ပါတီရဲ့CEC တွေ တောင် မျက်လူံးတိမ်ဖုံးနေလေရဲ့ 
စာကို ဖတ်လို့ နားမလည်ရင် တွေးးး …
အမှု့ တွေဟာ ဘယ်တော့ မှ ဟောင်းမသွားသလို … data တွေဟာလဲ နှစ်ကာလ တာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်လို့… မြန်မာ့ပထမဆုံး ရုပ်ရှင် မြဂနိုင်တောင် အခုထိ MRTV က လွှင့် နိုင်ဆဲဘဲ ဆိုတာ ဦးအောင်ကိုရော .. သူသမီးရော ပါ သိနိုင်ပါစေဗျာ … ok …
ဆလိုင်းချန် ကျဲအို says:
ဦး မောင် says:
Nice to see you Daw Levi. Hope to see you in Taiwan.
Lwin Than says:
မင်းကြီး ကနောင် says:
Maw Sed says:
HlwanMoe Thu says:
အာချောင် အောင်ကို သာသနာဖျက်
ဆရာ ကျော် says:
Salai Linn says:
May Thae Phyu says:
သွန်းဖြိုး သွန်းဖြိုး says:
တောင်ပေါ် သား says:
အမျိုးဘာသာ သာသနာတဲ့ ရှက်ရမှန်းမှမသ်ကြတာကို
Hla Min Thu says:
တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံနေတာနဲ့အမျိုးဘာသာ သာသနာလို့ပြောတာ ဘယ်နေရာမှာရှက်စရာကောင်းနေလဲ
အစိမ်းရောင် ချစ်သူ says:
လူဆိုတာကိုယ့်လို့ ပဲ သူများလည်းစားချင်မယ်ဆိုတာ
လူပဲ့ဖြစ်ဖြစ် မင့်နှိုင်းလိုက်တဲ့ခွေးပဲ့ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်စားခွက်ကိုလဲလုကြမယ် ကိုယ့်ပိုင်တဲ့နေရာ ကိုယ်နေတဲ့နေရာကိုလဲလုမယ်လို့သိရင် မင့်ဆိုရင်ရော့ငြိမ်ခံနေမလား
မင့်အိမ်ပေါ်မှာ မင့်မိသားစုရှိတယ် အခြားတယောက်က လာတောင်းနေပြီး မင့်နဲ့တန်းတူအခွင့်အရေးတောင်းမယ် မင့်မိသားစုကိုပါစော်ကားမယ်ဆိုရင်မင့်ခံနေမလားစဉ်းသားကြည့်ပါ
သူတို့ နေရာ သူတို့ ရဲ့ယုံကြည်ကိုယ်ကွယ်ရာ
ရှိခဲ့တယ် တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် ၁၄ခုခွဲ ခြားသတ်မှတ်မှတ်ခဲ့တာ
ဘာကြောင့်လဲ ဘာအတွက် ဘယ်သူတွေက သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာလဲ
မင်မသိရင်မှတ်ထား ပြေားပြမယ် အမျိုးဘာသာ ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ တိုင်းရင်းသားတွေကို အနိုင်ကျင့် လို့ ရ
လုပ်တာ အရှက်မရှိလို့ ပေါ့ 
တိုင်ရင်းသားတွေအားလုံးကို လွှတ်လပ်ခွင့် ပေးလိုက်ပါ
အစိမ်း ရောင်ချစ်သူ says:
Thihan Htet says:
Thit Sar Thit Sar says:
Ha ha ဘဲ ရမယ်ဟေ့ ။
Koshwe Pan says:
Anaw Rahta says:
Zin Min Win says:
မဘသ က ဘာလဲဗျ?
Naing Naing Lin Aung says:
မဘသဆိုတာ အမျိုးဘာသာ သာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ အတိုကောက်ပေါ့ဗျာ။
အကြောင်းမသိခင်ကတော့ ကျွန်တော် တော်တော်ကြီးကို လေးစားနေတာဗျို့။
တကယ်တန်းကျတော့ နာမည်ကောင်းသလောက် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက တခြားစီပဲဗျ။။မွတ်စလင်နှဲု့ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်မယ်။ပြည်သူ့အစိုးရကို ဆန့်ကျင်စကားပြောပြီး တိုင်းပြည်ဆူပူအောင်လုပ်နေသလိုကြီးပဲဗျ။
နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့ကြီးကိုတောင် ဂုဏ်ပြိုင်လာတဲ့အထိ ဆိုးလာတယ်။
နောက်ပိုင်းတော့ အဲဒီအဖွဲ့အကြောင်းသိတော့ ကျွန်တော် တော်တော်ရွံသွားတယ်။
made in myanmarလေးပြန်
မွတ်နဲ့ဗုဒ္ဓကို ဘယ်လိုမှိုင်းတိုက်တာလဲဗျ ကျော့်ကို နားလည်အောင်ရှင်းပြပါဦးဗျ
ကိုရင်သြ ကိုရင်သြ says:
TinmgwinEco Stats TinmgwinEco Stats says:
လေးစားပါတယ် ဝန်ကြီးနဲ့ အမကြီး
Naychi Nyeinchan says:
Ye Shint says:
Ye Simt says:
နမူနာပြောရရင်တော့ အရင်က မဘသဦးဆောင်ဆရာတော် ဦးဝီရသူ တရားပွဲတွေ ဟောပြောမှုတွေ လေ့လာကြည့်ပေါ့ဗျာ။ ကုလားကုလားနဲ့ မွတ်စလင်တွေကို စော်ကား ဘာသာခြားတွေကိုမုန်းတီးအောင် လုပ်နေတာနဲ့ မတူဘူးလား။
ဒါ့ကြောင့်လည်း သူ့တရားပွဲတွေ ပိတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာ။ ဒါတောင် မလျော့သေးဘူး ။ သူ့ ပါးစပ်ကို ပိတ်ပြီး ဝစီပိတ်တရားဆိုပြီး လုပ်သေးတာ။
Lay Lay Phyo Phyo says:
Khai No says:
ခွေးတွေကတော့ ဟောင်မှာပဲ။ဆက်လျှောက်ဘေးခွေးဂရုမစိုက်နဲ့။
ကျော်တစ်ခုမေးမယ်နော် ခု မြန်မာနိုင်ငံကို ဦးဆောင်တာက အန်တီစုလား? ဦးထင်ကျော်လားဗျ
Palaiashin Palai says:
ဘာသာတိုင်းကို တန်းတူအခွင့်​​ရေး ​ပေးသင့်​သလား။ သူတို့က​ရော ​ပေး​ပါသလား
ကရင်ကရင် ကရင်ကြီ says:
Salai Khin Maung Thein says:
သစ်တော် မြေ ဧကဘယ် လောက် ကြီး များ လျှေက် တောင်း အုန်း မှာ လည်း?
Zinyaw Minhtunn says:
U Myint Soe Kgn says:
Minn Theik Mon says:
zaw Win Naing ဒီစကားကို ရခိုင်တွေကို သွားပြောလိုက်ပါလား ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ မူဆလင်ကို မှိုင်းတိုက်တယ်လို့။
ဘာသာရေးလူမှုရေး ခွဲဆက်ဆံမှုမရှိဆိုပါရဲ့။ ပင်ရင်းဘာသာကို ဖိနှိပ်နေတာကျတော့ရော ဘာပြောမှာလဲ။
Tun Htet Oo says:
ဘာသာ သာသနာမှာ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဘူးဆိုတာ မှနိပါသလားသိချင်ပါတယ်
ငြိမ်းချမ်းရေး စာမျက်နှာ စာမျက်နှာ says:
ဘာသာရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဘူးဆိုရင် တစ်ခုပဲမေးချင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့က တရားမဝင် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို ဖြိုဖျက်ပြီးတော့ ရခိုင်မှာရှိတဲ့ ထောင်ချီတဲ့ တရားမဝင်ဗလီကို ဘာကြောင့် မဖြိုဖျက်ဘဲ ထားတာလဲလို့ သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Vrthanga Bochung Vrthanga says:
လာပြန်ပြီ ဗလီ အကြောင်း။
ဘာသာရေး ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဘူးဆိုလို့ ပြောတာလေ။ ကိုယ်တို့လူမျုိးအချင်းချင်းမို့လို့ ဦအောင်ကိုရဲ့ ဘုဏ်ေ်ဘွဲ့ကို ဖွဲ့မယ်ဆိုလည်း ကြည့်ဖွဲ့ကြပေါ့။ မဟုတ်မမှန်တာ အဟုတ်အမှန်လို အတည်ပေါက်နဲ့တော့ လာမလုပ်မနဲ့။
အောင် လင်း says:
တရားမ၀င်​ဘုန်းကြီး​ကျောင်းဆိုပြီး​တော့ဖျက်​တယ်​ တရာမ၀င်​တဲ့ဗလီဆိုပြီးတစ်​လုံးမှမဖျက်​ဘူးအဲဒါခွဲခြားတာမဟုတ်​​တော့ ဘာတုန်း
Zaw Khat says:
ဆောင်း ကြာညို says:
Min Chan Myae says:
ဘယ်အချိန်တုံးက ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဗလီတွေပါလည်းခမြာ
ဒီမှာ Min Chan Myae ခင်ဗျားဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အခုလိုမေးတာလဲ။ အဲလိုဆို ဦးအောင်ကိုလက်ထက် ဖြိုလိုက်တဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ ဘယ်တုန်းကဆောက်ပါတယ်လို့ ခင်ဗျား ဖြေနိုင်လား။ ရခိုင်မှာ ဗလီဆောက်ထားတာ ဘယ်အချိန်လဲဆိုတာာအရေးကြီးလို့လဲ။ ခင်ဗျားတို့က ကိုယ့်လူမျုိးချင်းဖာထေးချင်တဲ့ စိတ်ရှိတယ်ဆိုတာ နားလည်ပေးလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အစ္စလာမ်နဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘဲ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ဆန့်ကျင်မှုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ ဘာသာရေးအရ ဝေဖန်တာကိုတော့ ခံနိုင်ရမှာပေါ့။
မြန်မာနိုင်ငံ အနှံဘုန်းကြီးကျောင်းဖျက်တဲ့ သက်သေလေးတစ်ခုလောက်ပြပါလား
ဟ ဒီအကြောင်းကို ငါကပြန်ပြောမှ သိမှာဆိုတော့ ခင်ဗျား နိုင်ငံရေးအသိတော်တော်နောက်ကျတဲ့သူတစ်ယောက်လို့ သုံးသပ်လိုက်တယ်။ ပြန်လေ့လာကြည့်လိုက်ဦး အခုအစိုးရသက်တမ်း ရက် ၁၀၀ ကျော်လောက်အတောအတွင်းမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းပေါင်း နှစ်ရာကျော်လောက်ထိ ဖျက်လိုက်တာတောင် ဘာမှမသိလိုက်တာ ငါတော်တော် အံ့ကြမိတယ်။ နားမလည်ရင် လာမမန့်နဲ့ ခင်ဗျားကို ခင်ဗျား သိက္ခာချနေသလိုဖြစ်နေတယ်ြ
Minn Theik Mon
အဲဒါ ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်က နေပြည်တော်နားတစ်ဝိုက်က တောကျောင်းတွေကို နေပြည်တော် ပရဝုဏ်ထဲပါနေလို့ တရားမဝင်ဘူးဆိုပြီးဖျက်တာ ။
NLD အစိုးရတက်လာတော့ အဟောင်းတွေပြန်တင်ပြီး ဖွကြတာ
နင့်အဘသမ္မတ မဖြစ်ခင်ကတည်းက ငါ FB သုံးလာတာ ။စလုပ်တာလဲသိတယ် နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ဖွတာလဲ သိတယ် ။
ပါးစပ်ပြောနဲ့ လာမဖေါနဲ့ သေချာရင် သက်သေပြ။
ကျောင်း နှစ်ရာကျော်ဆို နေရာ ဒေသ တော်တော်ပါမှာဘဲ မင်းဘက်က သေချာရင် ဘယ်ပြည်နယ် ဘယ်တိုင်း ဘယ်မြို့မှာဆိုတာလောက်တော့ မင်းပြောလေ။
မင်းလျောက်ဖောနေတာဆိုရင်တော့ မင်းသိက္ခာ မင်းချတာနော်။
နင်က ကိုယ်တိုင်လည်း မသိ။ သိတဲ့လူတွေပြောတာကိုလည်း ဖင်ပိတ်ငြင်းချင်သေးတယ်။ နင်ဖေ့ဘွတ်သုံး အကြာကြီးသုံးနေတာ ဖွန်ကြောင်ဖို့ သုံးတာနေမှာပါဟာ။
ကြည့် အဲသတင်းမှာကြည့် တစ်ခါဖတ်လို့ နားမလည်ရင် ထပ်ပြီထပ်ပြီး နားလည်အောင်ဖတ်။ ငါ fb သုံးတယ်ဆိုတာ နင့်လို ဖွန်ကြောင်ဖို့ မဟုတ်ဘူဆိုတာ နင်နားလည်သွားလိမ့်မယ်။ နင့်သိက္ခာနင် ထပ်မချချင်နဲ့တော့ ဟုတ်ပြီလား။
သြော် FB သုံးတာ ဖွန်ကြောင်ဖို့ ဟုတ်လား
မှတ်တောင်ထားရအုန်းမယ် နင်အဲလိုလုပ်နေကျမို့နင်ပြောတာမဟုတ်လား တစ်ဘက်ပိတ်ရဲ့
နင်တင်ထားတဲ့ သတင်းလဲ နင်ဘာသာသေခြာ သဘောပေါက် အောင်ဖတ်အုန်း
တရားမဝင် ဘာသာရေးအဆောက်အဦ အားလုံးကို အရေးယူတာနော်
ပြီးတော့ မဟန ကို တင်ပြပြီးမှ မဟန ညွှန်ကြားချက်နဲ့လုပ်တာ
နင့်တို့ လာဘ်စား သခိုးတွေလက်ထက်ကလို လာဘ်စားပြီး မသိချင်ယောင် ဖွင့်ထားတဲ့ ဗလီတွေ မှိုလိုပေါက်မလာအောင် ဥပဒေနဲ့အညီ တပြေးညီထိန်းချုပ်တာ
သတင်းတစ်ခုထဲကိုတောင် လိုတဲ့စာဘဲ ရွေးဖတ်ပြီး ပြောချင်ရာပြောတဲ့ တစ်ဘက်ပိတ် ငပိန်းနဲ့ စကားဆက်မပြောချင်ဘူး အကုသိုလ်များတယ် အာရုံနောက်တယ် ဒါဘဲ ထပ်တက်လာရင် သိက္ခာနင်ထပ်ချတာဘဲ
နိုး မခုထိငါပြောနေတဲ့စကားတွေအထဲမှာ တစ်ဖက်ပိတ်စကားဆိုလို့ တစ်ခွန်းမှ မပါသေးဘူး။ တရားမဝင်ဘာသာရေါ်အဆောက်အဦးကို တရားဥပဒေအရ ဖျက်မှာလား။ ဖျက်လေ ဥပဒေမဲ့ ဘာသာရေးအဆောက်အအုံအားလုံးကို ဖျက်ရမှာပေါ့။ အခုဟာက အဲလိုမဟုတ်ဘဲ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကိုပဲ သတ်သတ်ဖျက်စီးပြီးတော့ ထောင်ချီတဲ့ ရခိုင်ကတရားမဝင်ဗလီကို ဘာဖြစ်လို့ မဖျက်တာလဲဆိုတာ နက်သာတစ်ပိတ်ပြီး ဦးအောင်ကိုကို မထောက်ခံရင် မြင်ရမှာပေါ့။ ငါက တစ်ဖက်သတ်မဟုတ်ဘဲ မျှမျှတတ တွေးပေးလို့ ဒီမေးခွန်းကို မေးလိုက်တာ ဘုန်းကြီးကျောင်း နှစ်ရာကျော်ကို သြဂုတ်လအတွင်းမှာပဲနော် ဖျက်လိုက်တာနော်။
အာရုံနောက်တယ် နင်ဘဲ သာသနာရေးဝန်ကြီးသွားလုပ်လိုက်ပါ
ဒါမှ ငါတို့ ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့ သာသနာ သက်တမ်း နှစ် ၅၀၀၀ ကနေ နှစ် တစ်သောင်း ဖြစ်သွားမှာ
တုံးတယ်လို့ပြောရင်လည်း နင်က ရှက်နာ နာနေဦးမယ်။ အမည်ခံတာက ဘာသာရေးအသီးသီး၏ ကျူးကျော်အဆောက်အဦး ဖျက်စီးလိုက်တာက ကျူးကျော်ဘုန်းကြီးကျောင်း။ ဘုန်းကြီးကျောင်းဆိုတာ ဗလီကိုပြောတာမဟုတ်သလို ခရစ်ယာန်ကျောင်းကို ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဟ။ သေချာဖတ်ကြည့်ဦူ
အဲဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ ဖတ်ပါ ဖတ်ပါ နားလည်အောင်ထပ်ဖတ်ပါဆိုတာ နင်က နားမှမထောင်တာ။ နင့်သိက္ခာကို နင်ကိုယ်တိုင် မချမိစေနဲ့ဆိုတာတောင်မှ ချဖြစ်အောင်ကို ထပ်ချလိုက်သေးတယ်။
ငါ ဝိုင်းတောင်ပြထားတယ် ကန်းနေလား နေပါကွာ တော်ပါတော့
ပထမတစ်ဝိုင်းက သူတို့လုပ်နေတယ်ဆိုတယ်ဆိုပြီး လိမ်ညာပြီး သတင်းဖြန့်တာ
ဟဒုတိယတစ်ဝိုင်းက ဖားကန့် လုံးခင်းက တရားမဝင်ဗလီကို ရွာသားတွေ ဖျက်ဆီးလိုက်လို့ နင့်အချစ်တော်က ဖမ်းခိုင်းတာ။ ကဲ နင့်မှာ စဉ်းစားတတ်တဲ့ ဦးနှောက်တော့ ရှိရင် စဉ်းစားတတ်မှာပေါ့။ တရားမဝင်ဘာသာရေးအဆောက်အဦးဖြိုတာတောင်မှ ဘက်မျှမှုရှိရဲ့လားလို့။
တရားမဝင် ဗလီ လွှဲပြောင်းပေးအပ်သူပါ အရေးယူတယ်လို့ရေးထားတယ်လေ
အဲဒါကြောင့်ပြောတာ စာကိုသေချာနားလည်အောင်ဖတ်ပါဆိုတာ။ အဝိုင်းလေးတွေတော့ ဝိုင်းထားပါရဲ့ အဲဒီစကားလုံးက ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတာ မသိတာက ခက်တယ်။ အခုလို စကားမျုိးပြောမယ်ဆိုရင် သေချာလေ့လာသင်ယူထားလိုက်။ အားအားရှိ လိုင်းပေါ်မှာပဲ ဖွန်ကြောင်မနေနဲ့။fb သုံးတာလည်း ကြာနေပြီဆိုတော့ ရှက်စရာကောင်းတာပေါ့ကွယ်
ဘယ်သူ့ကိုပဲ လွှဲပြောင်းပေးအပ် ပေးအပ် အဖြိုမခံဘဲ အရေးယူတယ်မလား။ တရားဥပဒေအတိုင်း ဖြိုရမယ့် ဘာသာရေးအဆောက်အဦးတွေ ရခိုင်မှာ ထောင်ပေါင်းများစွာရှိတယ်လို့နင့်အချစ်တော်ကို သတိပေးလိုက်ဦြး
ဖွန်ကြောင်တယ် ဆိုတဲ့စကားဘဲ ပြောတတ်
တော်တော် ယောကျာ်းပိသပါပေတယ် မိန်းမလို မိန်းမရကြီးရယ်
နင် နှမတွေ အမျိုးတွေသာ အဲလိုမဖြစ်စေနဲ့
နိုး ငါနင့်ကို မိန်းမလို မိန်းမရပြောစရာ ဘာမှမရှိဘူ
ငါပြောတဲ့အထဲမှာ အမှားပါသွားလို့ရှိရင် ငါ့ကိုထောက်ပြပြီးတော့ပြော။
Mg Mg Hlaing says:
Thwin Soe says:
Myint Oo Lay says:
I Love Myanmar က​ရေးထား​ဖော်​ပြထားတာ လူတိုင်းနားလည်​လွယ်​​အောင်​ ရှင်းရှင်း​လေး​ဖော်​ပြထားတယ်​ ခ​လေး​တောင်​ နားလည်​လွယ်​တယ်​ သူရဦး​အောင်​ကိုသည်​ သာသနာ​ရေးဝန်​ကြီးအဖြစ်​ (ဆက်​လက်တာဝန်​ထမ်း​ဆောင်​ရာတွင်​ လူမျိုး​ရေး ဘာသာ​ရေး ခွဲခြားမှု့လုံးဝမရှိ တန်းတူရည်​တူဆက်​ဆံ​သော)တဲ့ (ယခု​တော့ ဘာသာ​ရေးသစ္စာ​ဖောက်​လို့ပင်​ ​ပြောရမလိုပင်​) ဆိုတာကြီးက ဘယ်​ကကြားဝင်​ ကပ်​ ညှပ်​ဖြတ်​ လုပ်​ထားတာ ဘာကိုဆိုလိုမှန်း​တောင်​မသိပါ
ဘာသာ​ရေးနဲ့ပါတ်​သက်​ပြီး ဟိုဘက်​​ခေတ်​ ​ရော ဒီဘက်​​ခေတ်​​ရော ဘာသာ​ရေးအတွက်​ ​လေးစားခံရလို့ သာသနာ​ရေး ဝန်​ကြီး ဆက်​ခန့်​ထားတာ​လေ သာသနာ​ရေး ဝန်​ကြီး​နေရာအတွက်​ ဝီဒါမှမဟုတ်​ ဝိုင်းကို စာတတ်​​ပေတတ်​မို့ ​နေရာဇွတ်​ထိုး​ပေးချင်​​နေတာလာ သူများဘာသာ​တွေမုန်း​ကြောင်း လှည့်​ပတ်​ ​စောင်း​မြောင်း လုပ်​ပြမှ မုန်းပြမှ အမျုိး ဘာသာ သာသနာအစစ်​လို့ ဆိုလိုချင်​တာလား ဒီလို စည်းမရှိ ကမ်းမရှိ ​ရှောက်​ဆဲ ​ရှောက်​​အော်​​နေသူကို ထိုင်​ရှစ်​ခိုးတာ​လောက်​ ကုသိုလ်​ရမလား ရွံရမှာ လူဖြစ်​တုံး​လေး အမှန်​ဘက်​က ဆင်​ချင်​တုံတရား​လေး ဝတ်​​ကြောင်​မစွန့်​နိုင်​ လူမြင်​အပြ​ကောင်း​အောင်​ ဟန်​​ဆောင်​ အဝါ​ရောင်​သင်္ကန်းနဲ့ ရှိုးမထုတ်​​စေချင်​ပါ လုပ်​ဇတ်​​တွေမို့  ယိုသူမရှက်​​ပေမဲ့ မြင်​သူ​တွေက​တော့ ​တော်​​တော့ကိုရှက်​​နေပြီ
Thiha Sett Paing says:
Fake account နဲ့ ၀င်ဟောင်နေတာ အဖက်လုပ်မနေပါနဲ့ဗျာ
ရခဲလူ့ဘဝ တခဏ ပါပဲ ​နေ ဆိုတဲ့ အပူဂြိုလ်​နဲ့ ဆန့်​ကျင်​ဘက်​ အ​အေးဂြိုလ်​ တနည်း လ ​ပါပဲ ဒီဆန်​ကျင်​ဘက်​ဘက်​ ဂြို ၂လုံးကြားမှာ ကမ္ဘာဂြိုလ်​ ကကြားခံလိုက်​​တော့ ရိုက်​ခတ်​လာတဲ့ ဆန့်​ကျင်​ဘက်​နဲ့ ကမ္ဘာဂြိုသက်​ရှိ​တွေ အ​ပေါ်သက်​ဝင်​တာက သဘာဝရိုက်​ခတ်​ မှု့နဲ့ ဆန့်​ကျင်​ဘက်​ ပါရမှာသဘာဝပါပဲ ​အပူ​နေရှိရင်​ဆန့်​ကျင်​ဘက်​ အ​အေး လ ရှိ​နေပှာပဲ အ​ဖေရှိရင်​ အ​မေရှိမှ လူ​ရောသက်​ရှိတရိစ္ဆန်​လည်း ဖိုရှိမရှိမှာပဲ အ​ကောင်းရှိ အဆိုးရှိ ရှင်​ရှိ ​သေရှိ ရီရှိငိုရှိ ချိုရှိခါးရှိ ချဉ်​ရှိငံရှိ ​မေတ္တာဘက်​က ဘုရားရှိ ဖျက်​ဆီးမဲ့ မာနတ်​ရှ်ိ ကုသိုလ်​ရှိ အကုသိုလ်​ရှိ အစစ်​ရှိ အတုရှိ ​ပြောရရင်​အများကြီးပါ ​သေချာ​လေ့လာ​လေ လူတိုင်းထိ​တွေ့​နေတာမ​လေ့လာတာ အမှတ်​တမဲ့​နေလို့ပါ ​နေနဲ့ လသတ္တိပါ ဘာပဲဖြစ်​ပ​စေ အသိတရား​တော့ ​လောဘ​ဒေါသ ​မောဟ ​ကြောင့်မသိတရားဖက်​ ​ပြောင်းလည်း​နေတာပါပဲ မှား တာရှိ မှန်​တာရှိ​နေမှာပါ မှားမှန်းသိသိကြီးနဲ့ အမှန်​ကို မသ်ိကျိုးနွံပြုပြီး အမှားကို ကြံဖန်​အမှန်​​ပေး​နေတာက လူဖြစ်​တုံး​လေး လူစိတ်​​ပျောက်​ ငါထင်​ငါစိုင်း တာ လူဘဝတခဏ တနည်း အရွယ်​၃ ပါးကို​မေ့​လျှော့ အတ္တကြီး ဝင်​​နေတာပါပဲ ​နေထွက်​တာ မြန်​တယ်​ ဒါ​ပေမဲ့ ​နေဝင်​ချိန်​​လေး အတွက်​ လူ့ဘဝ ​နေဝင်​ချိန်​တ​နေ့ ​စောင့်​​နေတာ​လေး သတိရှိပြီး လူဖြစ်​တုံး ​မေတ္တာလွမ်းပြီး လူ့ဘဝ​ကြွေချိန်​​လေ လူဖြစ်​ရကြိုး ​မေတ္တာလွမ်းပါ​စေ​သော်​
Sandawuntha David David says:
အောင်ကိုကသာသနာဖျက်ဆိုတာမှန်နေတာသိကြပါတယ် လူချစ်လူခင်ပေါသလားဆိုရင် ကိုကြည်လင်းတွေအများကြီပေါ်လာရင်
Shwe Eain says:
မကုန်းမိရင် ဝိုင်းဆဲမယ် ရစရာမရှိအောင်ပြောမယ်ရေးမယ်
Bo Moe says:
Way Thein says:
Maw Maw Lay says:
Aungmyint Zaw says:
လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး မိမိတို့ယုံကြည်နှစ်သက်ရာကို
မှန်ကန် တည့်တရား ပါ